माछा आक्षेप: हानि र लाभ
समर्थकहरूको माछा व्यञ्जन तयार तरिकामा धेरै थाह छ र साथै प्रजातिहरू पोख्त छन्। तर, घर मा यो सबैभन्दा किफायती आक्षेप, क्षति र लामो, nutritionists द्वारा अध्ययन गरिएको collated जो र मानिसहरूलाई घोषणा प्रयोग हो। सबैभन्दा सजिलै पस्त माछा र पनि डाक्टर द्वारा सिफारिस धेरै खुसी। कुनै कम आनन्द र यो तयार गर्न सजिलो छ भन्ने तथ्यलाई सबै व्यञ्जनहरु उत्पादन धेरै स्वादिष्ट छ प्रदान बाहेक, कुनै पनि हालतमा प्रक्रिया गर्न सकिन्छ।
प्रकृति मा, त्यहाँ जंगली रूस मा उत्पन्न र सफलतापूर्वक नस्ल दुई जो माछा मात्र तीन प्रजाति छन्। यो चाँदी आक्षेप र bighead। मूल dietichen दोस्रो पर्याप्त tastier। उत्तरार्द्ध प्रकार, हाइब्रिड, तापमान थप सनकी, त्यसैले दक्षिण र कम साधारण को समतल मा सामान्य नजिक।
चाँदी आक्षेप को मुख्य लाभ बोसो समुद्री माछा को बोसो वास्तवमा यस्तै छ र शरीर मा कोलेस्ट्रल कम गर्न सक्छन्, यो मात्र अलवण माछा छ कि छ। तर यो प्रभाव मात्र होइन हानी जो र फाइदाको यहाँ देखेको छ आक्षेप लागि प्रसिद्ध छ। माछा सुखद प्रभाव को एक पुरा श्रृंखला प्रदान गर्दछ:
आक्षेप मासु पनि बच्चा खाना संलग्न हुन सक्छ कि उच्च आहार गुणहरू छन्। त्यहाँ मात्र यो माछा खान निर्धारित छ जो आहार, छन्।
पूर्ण पचाउन र बस दुई घण्टा चाँदी आक्षेप।
माछा को मासु हृदय, पेट, क्यान्सर र atherosclerosis विरुद्ध एक उत्कृष्ट निवारक हालतमा छ।
फस्फोरस, फलाम, जस्ता र सल्फर, चांदी आक्षेप मा निहित छन् जो, नङ बलियो छाला को रंग र अवस्था सुधार, बाल विकास उत्तेजित।
एकदम फैटी ध्यान दिनुहोस् कि चाँदी आक्षेप मासु। तर, बोसो को cleavage को सजिलो गर्न, यो पनि वजन भएका मान्छे को लागि contraindicated छ।
त्यसैले, कुशलता आक्षेप भनिन्छ माछा, क्षति र यो प्रयोग मूल्याङ्कन यदि बस छैन तुलना गर्न सकिन्छ। उत्तरार्द्ध माछा व्यञ्जन आपत्ति नगर्ने सबैलाई उपलब्ध छ। पहिलो मात्र छैनन् जलीय जीवन एक एलर्जी संग जन्म हुन भाग्यशाली गर्ने व्यक्तिहरूलाई गर्न खतरनाक।
को कावीयार राम्रो छ
आक्षेप नै उपयोगी गुण को बस एक गोदाम छ। तर, यो बढी उपयोगी आक्षेप roe छ। यसलाई कडा क्यान्सर मा कमजोरीको वशमा पऱ्यौं रोकन को एक माध्यम रूपमा सिफारिस गरिएको। यो, यो हेमोग्लोबिन शरीर का उत्पादन क्रियाशीलता, मधुमेह को रक्त शर्करा stabilizes गाउट र rheumatism मा जोइन्टहरूमा को राज्य normalizes। कावीयार आक्षेप निरन्तर मेनुमा वर्तमान हो भने, यसलाई फिर्ता सामान्य स्नायु प्रणालीमा, परिधीय र केन्द्रीय दुवै आउँछ। वहन कि आक्षेप मासु समग्र लाभ संग संयुक्त को बाछो यी चिकित्सकीय प्रभाव।
कावीयार को Appetizer
व्यक्तिगत बोनस माछा को अन्डा स्वादिष्ट छ र विभिन्न पक्षबाट खपत गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई विचार गर्न सकिन्छ। यो तलना, खैर, छैन सबै भन्दा राम्रो विचार छ। यो नुनीन नुन वा आफ्नै उनको किन्न, र त्यसपछि एउटा ठूलो सर्छ निर्माण राम्रो छ। साना प्याज, प्राथमिकताको सेतो एक grater वा puree ब्लेंडर मा जमीन छ: यसलाई यसरी छ। हटाइएको को आवारागर्दी ~ टुकडा को एक सानो टुक्रा बाट, दूध मा macerated र निचोडा। दुवै घटक कावीयार तीन spoonfuls संग जोडिएको र तेल को आधा कप को एक ढिलो र क्रमिक परिचय संग अधिकतम गति मा मार छन्। सम्पूर्ण हावा बनेको प्रसार हुनेछ, यो आधा कागति निचोडा छ। मिक्सर वा ब्लेंडर रोक्न छैन! भइरहेको चिल्लो, ताजा hlebushek मा खाजा धब्बा र आनन्द।
बैगुन संग नुस्खा
धेरै स्वादिष्ट र रसदार तला आक्षेप। तर पैन मा माछा स्लाइस राख्नु - यो नीरस र आदिम छ। र तपाईं एक आहार मा हुनुहुन्छ भने, त्यसैले पनि सिफारिस गरिएको छैन। हामी तपाईंलाई निम्न नुस्खा प्रस्ताव। घन मा कटौती छाला देखि साफ बैगुन को आधा किलो, पीठो र पोलेको मा लुढका छ। लगभग माछा नै नम्बर पनि, अंश मा कटौती, पीठो र खैरो संग paneer छ। दुवै घटक तहहरू र विशेष सस भरिएको अर्को कन्टेनर थपिएका छन्। यसलाई passaged साग र अजवाइन, प्याज, आधा Boiling गर्न टमाटर रस को वाहेक संग कभर ग्लास अन्तर्गत languishing whereupon जरा चोट। थप एक कागति स्वादिष्ट सस, चिनी, नुन र मरिच र राम्रो छनौट मार्फत rubbed। बैगुन सस infusions संग माछा, सबै तालिका बसिरहेको जब Mistress को प्रशंसा गाउनेछु।
एक आक्षेप तपाईं पनि आहार लाग्छ तला भने, अर्को भोजन पकाउन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। लास अंश कटौती र नुन, लसुन, मरिच र कटा साग को एक मिश्रण मा दुई घण्टा खटाई मा हालन। त्यसपछि रन-माछा स्लाइस सारा गहुँको पीठो र उच्च गर्मी। ब्राउन तिनीहरूलाई भन्दा धेरै चाँडै। अब पन्ध्र मिनेट लागि ओवन मा tolstodonnuyu पैन र स्थानमा आक्षेप को टुक्रा थप्नुहोस्। सरल तला माछा लगभग 180 एकाइहरु यस्तो आक्षेप को एक क्यालोरी सामग्री भइरहेको संग तुलना मात्र 125 किलो कैलोरी "लम्ब्याउनु"।
यो उद्देश्य चाँदी आक्षेप लागि विशेष उपयोगी - यो कम चिल्लो लागेको छ। तर तपाईं यदि विकल्प उहाँलाई फेला परेन छन् प्रयोग र motley गर्न, राख्न सक्नुहुन्छ। यस राजदूत तीन चरणमा हुनेछ - त्यसैले थप स्वादिष्ट र कोमल नुनीन आक्षेप हुनेछ।
लास, gutted ब्रश र धोए, को हड्डी को सबै भन्दा को छुटकारा हुन्छ। अल्छी राम्रो विवेक मा यो चरण बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ, तर तिनीहरूले गाह्रो हुनेछ पछि माछा खान। शुद्ध मासु कट मध्य-आकारको स्लाइस कुनै पनि उपयुक्त पट गठन र सबै पक्ष नुन मा liberally छर्कियो।
पानी सिरका संग पतला एक-तेस्रो भरिएको आधा एक घण्टा आक्षेप पछि। माछा मा 20 मिनेट सामना गर्नेछ।
चाँदी आक्षेप को स्लाइस राम्रो धोए र धेरै ग्लास गर्न हल्कासित निचोडा, तर स्लाइस विकृत छैन। अब तिनीहरूले जार मा थपिएका छन्, र प्रत्येक पङ्क्ति सूर्यमुखी तेल गिरा। पनि माछा प्याज छल्ले तहहरू बदलता यदि tastier।
एक दिन को लागि क्षमता चिसो पठाइएको छ। यो समयमा, माछा prosolitsya पूर्ण।
नुनीन आक्षेप को ठूलो परिमाणमा मृगौला समस्याहरू मानिसहरूको स्वास्थ्य अवस्था worsen गर्न सक्नुहुन्छ भनेर नबिर्सनुहोस्। त्यसैले यो मुख्य पाठ्यक्रम र मेनुमा राम्रो साथै गरौं।
सबैभन्दा स्वादिष्ट पाकेका आक्षेप। यो तयारी मा हानि र लाभ मधुर स्वर उपभोक्ता लागि सकेसम्म सन्तुलित: को यथासक्य खेती उत्तरार्द्ध र क्षति पनि वजन खोने लागू छैन। साथै, सुखा गर्दा, तपाईं पूर्ण भोजन तयार गर्न सक्नुहुन्छ, र अतिरिक्त garnish संग चिन्ता छैन। कट, prisalivaem, आधा एक घण्टा कागति र marinated संग sprayed, को आक्षेप fillets लिनुहोस्। त्यसपछि एक मोटी पत्र एक पाक पानामा बाहिर राखे प्याज छल्ले, तिनीहरूले - एक पंक्ति मा गाजर स्लाइस, पछि - माछा। त्यो छल्ले जैतून र मशरूम प्लेट राखिएको। ओवन मा, यो निर्माण चालीस मिनेट वा एक घण्टा धारण छ। पनीर wakes र यसको पग्लिने फिर्ता आउँछ पकवान गर्न इच्छुक अघि।
Frying लागि तेल: तयारीको र समीक्षा मा चयन, निर्देशन विशेषताहरु
को मशरूम कसरी ह्यान्डल गर्न? ताजा मशरूम कसरी ह्यान्डल गर्न
अर्थतन्त्रको पूंजी एक मौलिक घटना हो
"Saguday": को नुस्खा। मैकेरल को "Saguday", सामन, व्हाइटफिश देखि व्हाइटफिश को: नुस्खा फोटो
टायर Hankook W419: समीक्षा
आहार सजिलो वजन छ
टोपी इन्जिन मर्मत वा पूर्ण प्रतिस्थापन? जो राम्रो छ?